Wufuud gaartay Cadaado si ay uga qeybqaatan dhisida maamulka cusub ee gobolada Mudug & Galgaduud |
Wufuud gaartay Cadaado si ay uga qeybqaatan dhisida maamulka cusub ee gobolada Mudug & Galgaduud
Cadaado (Somalimedia Online) – Magaalada Cadaado ee xarunta maamulka Ximin iyo Xeeb waxaa gaaray wafdi uu hoggaaminaayo madaxweynaha maamulkaas Baarleex iyo seddax sarkaal oo ka tirsan ciidamada dowladda fedaraalka.
Wafdiga ayaa ka tagay magaalada Muqdisho, waxaana markii ay halkaas gaareen soo dhaweeyeen mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Ximin iyo Xeeb.
Madaxweyne ku xigeenka maamulka Ximin iyo Xeeb ayaa warbaahinta u sheegay in wafdigan ay hor dhac u yihiin shirka dib u heshiisiinta ee dhawaan ka furmaya Cadaado kaasoo la rabo in lagu dhiso maamul ay ku mideesan yihiin gobalada Galgaduud iyo Mudug.
Wuxuu kaloo sheegay in ay qiimeen doonaan xaaladda guud ee magaalada gaar ahaan ammaanka iyo goobta shirka lagu qabanaayo.
Dhinaca kale, madaxweyne ku-xigeenka maamulka Ximin iyo Xeeb ayaa sheegay in ciidamadooda ay gacanta ku dhigeen nin la sheegay in uu dadka deeganka yahay kaasoo xilli habeen ah calanka madow ee astaanta u ah Al-Shabaab ka taagay bartamaha magaalada.
Wuxuu sheegay ninkan in hadda gacanta ugu jirro hey’addaha ammaanka oo su’aalo la weydiinaayo sida uu hadalka u dhigay.
Wafdigan ayaa horrey looga soo celiyay degmada Guriceel oo ay ka arrimiyaan Ahlu Sunna, kaddib markii la sheegay in wax fasax aan la siin in ay yimaadaan.
Magaalada Cadaado ayaa la isku raacay in lagu qabto shirka lagu dhisaayo maamulka gobalada dhexe kaasoo hadda ay jiraan mucaaradyo ay la kulmayaan.
Dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa dhowaan magacawday guddi ka kooban 27 xubnood oo ka shaqaynaya sidii loo dhisi lahaa maamul ay yeeshaan gobollada Mudug iyo Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya.
buy Kamagra Gold, order clomid.